२० दिनमा पनि अनसनरत डा. केसीका मागको सुनवाई भएन « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
२० दिनमा पनि अनसनरत डा. केसीका मागको सुनवाई भएन
काठमाडौंः चिकित्सा शिक्षा सुधार लगायतको माग गर्दैै डा. गोविन्द केसी आमरण अनसन बसेको आज २० दिन पुगेको छ । यत्ति लामो समयदेखि अनसनमा बसेका त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्रा गोविन्द केसीका प्रतिनिधि र सरकारी वार्ता टोलीबीच पटकपटक वार्ता भए पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन् ।
बिहीबार रातिसम्म चलेको वार्ता निष्कर्षमा पुग्न सकेन । गएराती अबेरसम्म भएको वार्ता निष्कर्षवहिन भएपछि शुक्रबार फेरि वार्ता हुने भएको छ ।
हिजोको बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा, शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेल, लगायत नै वार्तामा बसेपनि सहमति हुन नसकेको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केसीका माग सम्बोधन गर्न निर्देशन दिए लगत्तै स्वास्थ्यमन्त्री थापा र शिक्षामन्त्री पौडेल केसीसँग वार्ता गर्न पुगेका थिए ।
शुक्रबार बिहानैबाट डा. केसीका मागका सम्बन्धमा बार्ता गर्ने बताइएको भए पनि अझैसमम वार्ता हुन सकेको छैन । डा. केसीले त्रिविका उपकुलपति तीर्थ खनियाँ र चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका डिन केशवप्रसाद सिंहको राजीनामाको माग गर्दै आएका छन् ।
सरकारी र केसी पक्षका वार्ताटोलीबीच राजीनामाका विषयमा नै वार्ता केन्द्रित भएपनि सहमति हुन नसकेको वार्तामा सहभागी स्वास्थ्यमन्त्री थापाले जानकारी दिए । आमरण अनसनको २० औँ दिन पुग्दा डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बन्दै गएको छ । चिकित्सा क्षेत्रमा देखिएका विकृतिको अन्त्य हुनुपर्ने भन्दै केसी १० औँ पटक आमरण अनसनमा बसेका हुन् ।
केसीका माग आंशिक मात्रमा मात्र सम्बोधन हुँदा उनले पटकपटक अनसन बस्नु परेको छ यस पटक भने उनका माग पूरा गराउन सरकार असफल भएको भन्दै विरोध प्रदर्शन हुन थालेको छ ।
उर्लाबारी – उर्लाबारी —९ निवासी युवा समाजसेवी सुन्दर श्रेष्ठले मोरङको रतुवामाई १० स्थित महेन्द्र माध्यमिक
मामाघर गएकी नसिमाको पानी तान्ने मोटर जोडेको ट्युबेलमा नुहाउने क्रममा करेन्ट लागेर मृत्यु
राजविराज- सप्तरीको बोदे बर्साइन नगरपालिका–२ नेंगडामा करेन्ट लागेर आज एक किशोरीको मृत्यु भएको छ ।
राजविराज, १० असारः पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सप्तरीको सीतापुरमा आज मोटरसाइकल दुर्घटनामा परी एक जनाको मृत्यु
जाजरकोट, १० असारः बालविवाह रोक्नका लागि स्थानीय सरकारले अभियानका रुपमा विभिन्न कार्यक्रम गर्ने सञ्चालन गर्ने